anti_Muslim_in_Myanmar Archives - News @ M-Media
မြိုင်ကြီးငူ၏ တရားမ၀င်ဘုရားတည်နေသည့်ကိစ္စ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သမ္မတရုံးတို့ထံ အမှုတွဲတင်ပြပြီးဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရဆို
M-Media ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၆ . ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရထံ မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်၏ တရားမ၀င်ဘုရားတည်နေသည့်ကိစ္စအား နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ သာသနာရေးနှင့် ယာဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် ၀န်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုက ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု မြန်မာတိုင်းမ်စ်သတင်းတစ်ရပ်က ဖော်ပြထားပါသည်။ .[Read More…]
April 29, 2016 — မြန်မာသတင်း
ဂျွန်းဗလီဝင်းအတွင်းမှ ဖမ်းဆီးသွားသည့် ၅-ဦးအား ၈-ရက်နေ့ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမည် မီဒီယာအချို့ တဖက်စောင်းနင်းရေးသားနေကြ
ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၄ M-Media သုတ ဇူလိုင် လဆန်းက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မန္တလေးမြို့ အကြမ်းဖက်မှုတွင်ဖြစ်စဉ်တွင် လူ၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြိး လူအများအပြားဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ တဖက်သက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြိး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းအမှားအများအပြား ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြိး[Read More…]
July 5, 2014 — မြန်မာသတင်း
ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားရန် မန္တလေးတွင် လှုံ့ဆော်ခဲ့သော်လည်း ပြန်လည် တည်ငြိမ်
ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ M-Media သုတ မန္တလေး ။ ။ မန္တလေးမြို့ ၂၇-လမ်းနှင့် ၈၂-လမ်းထောင့်ရှိ ဆန်းလ္ဘက်ရည်ဆိုင်ရှေ့တွင် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားစေရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သော်လည်း အချိန်မီ တားဆီး ထိန်းသိမ်းနိုင်သဖြင့် ယခုအခါ အခြေအနေ ပြန်လည်[Read More…]
July 1, 2014 — မြန်မာသတင်း